Hipped छत - देश घर को सजावट
सबै को महत्व उच्च डिग्री राम्ररी थाह छ भन्ने तथ्यलाई दुवै निर्माण छत घर र यो एक नमूना हो। को क्यू को स्तर र डिजाइन को विशुद्धता घर मा आराम र धेरै टिकाउ निर्माण दुवै मा निर्भर गर्दछ। किनभने छत संरचना ठूलो हेरविचार संग नजिक हुनुपर्छ। त्यहाँ धेरै छन् छत को प्रकार, र्याम्प एक प्रकारको छ hipped छत, - तर आजको लेखको विषय।
Hipped छत पनि पाल भनिन्छ। यस प्रकारको एक आयताकार आकृति र क्रमशः चार ramps presupposes। एक त्रिकोण आकार - तिनीहरूलाई को पहिलो दुई एक trapezoidal आकार, र बाँकी छन्।
छत यस प्रकारको पाल वा पाल को डिजाइन गर्न धेरै हदसम्म समान छ, त्यसैले यो घर आवश्यक छ जब पर्याप्त बलियो र gusty बतास विरुद्ध मजबूती रक्षा गर्न प्रयोग गरिएको छ।
डिजाइन gambrel छत थप रेज एक उपस्थिति implies। तिनीहरूले hipped छत, संग रिज संभोग को माध्यम द्वारा गठन गर्दै एक gable छत। कि संरचना को दृश्य दुई मुख्य भागहरु हुन्छन् छ: gable छत र दुई नितम्ब (को वारंटी क्षेत्र कवर डिजाइन जो) (यो पूर्ण लम्बाइ मा घर बंद)। यो ramps र नितम्ब को आकार को बीच अनुपात पालन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तथ्यलाई तपाईं चरम रैक रेज थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ किनभने तिनीहरूले, एक अतिरिक्त बोझ सिर्जना छ।
यी शहर घरहरू निर्माण मा प्रयोग गरिन्छ। डिजाइन सन्दर्भमा संग, hipped छत उपकरण समर्थन लागि विशेष बोर्डहरू र hipped opilnyh Trusses अस्तित्व implies। Krepilnye काम नङ, स्क्रू, तार र धातु तार को माध्यम द्वारा बाहिर छ। सबै काठ सम्झना छत को तत्व देश घर को घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र आगो-लड उपकरण संग उपचार गर्नुपर्छ।
Gambrel छत स्थापना आफ्नै विशेषताहरु छन्। यो घर को उपस्थिति सिर्जना जो सही छत सामाग्री, चयन गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ। छत यस प्रकारको भू-भाग कुनै पनि प्रकारको मा फिट भन्ने तथ्यलाई। एक gable छत र पक्ष ramps को क्षेत्र को अनुपात सही चुनिएको छ भने, त्यसपछि यसलाई चिटिक्क र सुन्दर हेर्न हुनेछ।
विशेषज्ञहरु पहिलो पटक यो काम गर्ने मान्छे गरिरहेको नगर्न गर्न सल्लाह त छत यस प्रकारको को स्थापना मा स्थापना काम, केही सीप र अनुभव आवश्यक भन्ने तथ्यलाई।
मिति, धेरै लोकप्रिय उपकरण पूर्ण अटारी कोठा प्राप्त गर्दछ। यो छत को परिवर्तन सहित एक निश्चित काम, आवश्यक छ। यसरी, hipped छत बस छत एक प्रकारको रूपमा यो मामला मा प्रयोग। यो पुनर्निर्माण मामला हो भने, त्यसपछि त्यहाँ skylights छन्।
यस मामला मा, एक mansard hipped छत राम्ररी स्थापित हुनुपर्छ। सबै को पहिलो, यो मौसम देखि एक राम्रो रक्षा सुविधाहरु सिर्जना गर्न ताकि डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो गर्मी, हाइड्रो, र वाष्प बाधा प्रभाव हुनुपर्छ।
gambrel छत उपकरण मिति भन्दा विश्वसनीय हुन मानिन्छ। यस प्रकारको किन देश घरहरू र फारमहरु को मालिक संग धेरै लोकप्रिय छ कि छ। त्यो विश्वसनीय, धेरै वर्ष को लागि निर्माण हुन विश्वास र एक उत्कृष्ट सौंदर्य उपस्थिति छ छ। छत को आकार पुरातन समयका देखि ज्ञात गरिएको छ, तर यो मात्र अन्तिम दशकमा लोकप्रिय र लोकप्रिय भएको छ।
छत निर्माण गर्न राम्रो जान्छ, यो सबै प्रिपेरेटरी काम र आवश्यक सामाग्री को विकल्प विशेषज्ञहरु द्वारा गरिन्छ आवश्यक छ। आदर्श - गतिविधिहरूको पूर्ण दायरा बाहिर गर्न व्यवसायि, छैन एमेच्योर द्वारा। त्यसपछि छत लामो समय टिक्न र आफ्नो घर को एक अद्भुत सजावट हुनेछ।
काठ संरचना लागि फास्टनरों: प्रकार। काठ लागि धातु फास्टनरों
दिन के राम्रो काठ ओवन?
यूरोस्टयान्डर्ड लागि स्विच र सकेट को स्थापना उचाइ
युक्रेन गर्न मानवीय सहायताको। मानवीय सहायता कहाँ प्राप्त गर्न। शरणार्थी गर्न मानवीय सहायताको
के म अनानास आफैलाई बढाउन सक्छु? सञ्झ्यालमा अनानास कसरी विकास गर्ने?
भोयला तीन रंगीए
हजुरआमालाई कसरी जाम पकाउने?
Chingiz Aitmatov को जीवनी: गतिविधि, सबै भन्दा राम्रो किताब, र रोचक तथ्य
आँखा "Kvinaks" खस्छ
को ताप उसिनेर चिकन स्तन के हो
रेस्टुरेन्ट Balashikha: शहर को सबै भन्दा राम्रो संस्थाहरु को एक समीक्षा
जनसंख्या र पेन्जा क्षेत्र। विकास गतिशीलता